ရှုမ၀မဂ္ဂဇင်း ၁၉၅၃ | Ma Shwe Mi
October 23, 2009 at 4:28 pm4comments
အော် ဒုတ်ခ…ဘလော့ရေးတာစွဲတယ်လို့ မမခင်ဦးမေပြောတာဟုတ်မယ်။ တရက်သားဘလော့ကလေးကို ပို့စ်သုံးခုလောက်တင်ထားမှလာလည်ကြတဲ့သူတွေလဲ ကလစ်နှိပ်ရတာတန်မယ်လေ။ ဒီတော့ကာ နောက်တပို့စ်တင်လိုက်ဦးမယ်။ ပြီးရင်တော့ အိပ်ပီ။
ဘာပို့စ်တင်မလဲ ဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်းစာအုပ်တွေအကြောင်း။ မရွှေမိမေမေရဲ့ အဘိုး မရွှေမိရဲ့ ဘိုးဘိုးကြီးကိုမရွှေမိက ကောင်းကောင်းမီလိုက်ပါသေးတယ်။ အဘိုးကစာဖတ်ဝါသနာပါတယ် ။ စာအုပ်စာပေကိုလဲတန်ဖိုးထားတယ်။ နယ်ကအိမ်မှာဆိုအောက်ထပ်တထပ်လုံးလူမနေဘူး။ စာအုပ်တွေပဲထားတယ်။ မရွှေမိလဲစာအုပ်တွေကြားမှာကြီးပြင်းခဲ့ရတော့ စာဖတ်အရမ်းဝါသနာပါတယ်။ ငယ်တုန်းကရင်းစာဖတ်နေရပီးရော။
အင်း…အဲဒါတွေနောက်မှပြောမယ်။ ဒီတခေါက်ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက စာအုပ်တွေကိုအမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တာလေးတွေပြချင်လို့။
ခုခေတ်မှာသာမဂဇင်းတွေမှိုလိုပေါက်ပီး ဘာဖတ်လို့ဖတ်ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်နေတာ။ အရင်ခေတ်ကတော့ ရှုမ၀၊မြ၀တီ၊သွေးသောက်၊ငွေတာရီ ဒီလေးအုပ်က အဓိကပဲ။ အဲဒီမှာမှ ရှုမ၀ ကတော့အအောင်မြင်ဆုံးလို့ခန့်မှန်းရတာပဲ။ ကိုယ်သိလို့တော့မဟုတ်ဘူးလေ။ စာအုပ်တွေကိုယှဉ်ကြည့်ရင်သိသာသလားလို့။
မရွှေမိကတော့ ရှုမ၀ ကိုအကြိုက်ဆုံး။ နောက်မှမြ၀တီ။
ဒါကတော့ ၁၉၅၃ ခုနှစ်ထုတ် ရှုမ၀ရဲ့ အဖုံးလေးပေါ့။ အဲဒီတုန်းက ပန်းချီဆရာတွေကိုပဲ အဖုံးအပ်ပီး အမျိုးသမီးလှလှလေးတွေရဲ့ပုံကိုရောင်စုံဆွဲတာကိုသုံးတယ်။ ပန်းချီဆရာကတော့ ဦးကိုလေး။ ခုတွေးမိနေတာက အဲဒီအချိန် ၁၉၅၃ တုန်းက မရွှေမိတယောက် ဘယ်ဘ၀မှာများလူဖြစ်နေလဲလို့ ။ အမယ် ဒီစာအုပ်ရဲ့ အသက်က မရွှေမိ မေမေရဲ့ အသက်ထက်တောင်ကြီးသေးတယ်ရှင့်။
အဲဒီတုန်းက မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ပါတဲ့မာတိကာတွေကို စာအုပ်နောက်ကျောမှာရိုက်လေ့ရှိတယ်။ ဒီတော့ဝယ်မယ်ဆို အဖုံးကိုကြည့်။ ဘယ်စာရေးဆရာတွေဒီလပါလဲဆိုတာနောက်ဖက်လှန်ကြည့်ပီးဝယ်လိုက်ရုံပဲထင်တယ်နော်။ ဒီခေတ်မှာများတော့ စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာကို ကြောငြာစာရွက်တွေကြားမှာမနဲရှာယူရတာကိုး။
မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြည့်လိုက်ပါ။ဖတ်ချင်စရာမကောင်းဘူးလား။ ဆောင်းပါး၊၀တ္ထု(အခန်းဆက်၊အရှည်) ကလေးတွေအတွက်၊ကဗျာ စုံနေတာပဲပါတာ။ ဖတ်ရတာလဲတန်တယ်။ အများကြီး။ ဒီစာအုပ်မှာဆို တင့်တယ်ရဲ့ ၀တ္ထု၊သာဓုရဲ့ အခန်းဆက်ဝတ္ထု …မြင်ရတာတောင်လွမ်းစရာကောင်းတယ်နော်။ မြန်မာစာပေလောကကြီးရဲ့ ရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့အချိန်တွေကို။
စာရေးဆရာသော်တာဆွေရဲ့ အဆိုအရတော့ ရှုမ၀ရဲ့ ရွှေရောင်အတောက်ပဆုံးကာလတွေကတော့ ၁၉၅၀-၁၉၆၅ လောက်ထိပါတဲ့။ ခေတ်စံနစ်တွေ၊နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကစာပေလောကအပေါ်မှာဘယ်လိုသက်ရောက်တယ် ဘာညာဆိုတာတွေကတော့ မရွှေမိ ဥာဏ်မမီလို့ အာလူးမဖုတ်တော့ဘူး။ ကိုယ်ကစာဖတ်သူအမြင်နဲ့ပဲသိတာကိုးရှင့်။
အခုခေတ် မဂ္ဂဇင်းတွေမှာတော့ ရွှေအမြုတေနဲ့ ကလျာကဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါတောင် ကလျာက နောက်ပိုင်းပေါ့ပ် ကိုနဲနဲပိုအသားပေး လာတော့ဖတ်ရတာတမျိုးဖြစ်နေတယ်။ သူလဲဈေးကွက်အရနဲနဲပြောင်းလိုက်ရတယ်လို့သိရတယ်။ရွှေကတော့ ခင်ခင်ထူး နေ၀င်းမြင့်တို့နဲ့ ဝေေ၀ဆာဆာဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။
အင်း …စိတ်ကူးယဉ်မိတာကတော့ ရှုမ၀ဦးကျော်လိုမျိုး စာပေသမိုင်းမှာမှတ်တမ်းဝင်တဲ့ ရှုမ၀မဂ္ဂဇင်း လိုမဂ္ဂဇင်းမျိုး ထုတ်ချင်လိုက်တာ။ တကယ်ကို စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်ပါပဲလေ။ ခေတ်ကြီးကိုက အဟောင်းတလည်လည်နဲ့ ရှေးကစာအုပ်တွေကိုသာပြန်ထုတ်ပြန်ဖတ်နေရတဲ့ခေတ်ကိုး.။ အင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာဆိုတော့ ဒီလိုမဂ္ဂဇင်းမျိုးထုတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ကတောင် ဒိတ်အောက်နေပီလားမသိ။ မရွှေမိကလဲခေတ်မှီချင်သေးတာ။:D
(ပို့စ်တွေကိုပြန်ဖတ်ကြည့်တော့စာလုံးတွေကျဲနေတာတွေ့ရတယ်။ ဘယ်လိုပြင်ရမယ်လဲမသိဘူး … လမ်းညွန်ပေးကြပါဦးရှင်)
Entry filed under: စကားစမြည်, ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်တွေအကြောင်း.
1. SDL | October 24, 2009 at 5:31 pm
စာအုပ်တွေ အကြောင်းပြောချင်လွန်းလို့ ဘလော့လုပ်တာ… ကောင်းပါ၏။
အဲဒီမျက်နှာဖုံးမျိုးနဲ့ ၇ှူမဝ အဟောင်းတွေ ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးပါတယ်။
2. mashwemi | October 23, 2009 at 11:30 pm
TTSweet, MrLuPyoGyi လာလည်ပီးကွန်မင့်လေးတွေချန်ခဲ့တာကျေးဇူးပါပဲရှင် 🙂
မမဆွိရေ ဟုတ်တယ် မရွှေမိဝါသနာပါတာ စာအုပ်နဲ့အစားအသောက်က အဓိကပဲ။ စာအုပ်တွေအကြောင်းပဲပြောချင်လွန်းလို့ကိုဘလော့လုပ်လိုက်တာ 😀
3. TTSweet | October 23, 2009 at 10:30 pm
မရွှေမိက စာပေ၀ါသနာအိုးနဲ့တူတယ်နော် … အစ်မလဲ ငယ်ငယ်က ရှုမ၀ကို ကြိုက်တယ်။ သူက၀ထ္ထုတိုတွေ အများကြီးပါတယ်။ မရွှေမိပြထားတဲ့ စာအုပ်က ကြာလှပြီနော်။ အဲဒီခေတ်ကိုတော့ မမီပါဘူး။ ဆရာသော်တာဆွေလဲ ကြိုက်တယ်။
4. လူပျိုကြီး | October 23, 2009 at 6:32 pm
ဗမာစာလုံး အဖြတ်အတောက် ပြဿနာပါ ဘယ်လိုမှရှင်းလို့မရသေးပါဘူး သင့်လျော်သလိုသာ စာလုံးလေးတွေခြားရေးပါ မခြားပဲစာလုံးအရှည်မရေးပါနဲ့ ဒါမှမဟုတ်လည်း Justify မလုပ်ပါနဲ့ Left Align ဆိုရင်လည်း ညာဘက်အခြမ်းမှာ အတိုအရှည်ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာတော့ ရှိနေဦးမှာပါ။